IChengdu Taiyi Energy Technology Development Co, Ltd.
Izinto ezine ongazikhathaza kakhulu
Eyodwa --- Isevisi yokuthengisa ngemuva
Imvamisa lapho izimpahla zifika lapho umthengi eya khona, sizozixazulula kungakapheli amahora angama-48 ngocingo noma noma yiluphi uhlelo lokusebenza lokuxhumana nomphakathi njenge-whatsapp, wechat njll ,. uma kunezinkinga ezithile zezimpahla. Ngokufakwa, sizokunikeza ividiyo noma imiyalo yokusebenza kuwe. Kodwa-ke, uma uthola ukuthi kukhona izimpahla eziphukile futhi kungaphakathi kwewaranti, siphethe isondlo mahhala. Kepha umthengi kufanele athwale imithwalo emuva.
Okubili --- Izimpahla Zekhwalithi
Impahla yethu iphase isivivinyo se-ISO 9001, kukhombisa ukuthi bakufanelekele okungenani. Ngaphezu kwalokho, ukukhanya kwethu ngakunye okuzohlolwa kuzohlolwa ngokuthelwa nokushaywa kwamanzi, isivivinyo se-ex-proof kanye ne-anti-corrosion test. Noma sikuthembisa nje ukuthi amalambu ethu anesiqinisekiso seminyaka emi-3, empeleni, angasetshenziswa iminyaka emi-5 kuye kwengu-8.
Okuthathu --- Ucwaningo
Bangu-15 abasebenzi bocwaningo enkampanini yethu, futhi banesibopho sokuthuthukisa ucwaningo lobuchwepheshe nomsebenzi wokuthuthukisa; ukuboniswa nokuthathwa kwezinqumo kwamaphrojekthi we-R & D wenkampani; ukulungiswa, ukuthuthukiswa nokubhalwa kombiko kwezilingo zocwaningo nentuthuko kanye nokwakhiwa kwezisekelo zocwaningo lwesayensi kanye namaqembu ocwaningo lwesayensi.
Sinikeza izindlela ezintathu zokuhamba namakhasimende ethu. Ngokuhleleka okukhudlwana, ukuthuthwa kolwandle kungukukhetha kwethu kokuqala. Ngenkathi i-oda elincane, i-oda lokulingwa noma i-oda lesampula, sizokhetha ukuhanjiswa kwamazwe omhlaba noma ukuthuthwa komoya uma ikhasimende lingenza imali yokuthumela. Ukuze kukhethwe ichweba, imvamisa sizokhulula ukukhanyisa kusuka eChongqing, Ningbo, Zhejiang noma eGuangzhou port. Uma ikhasimende linomhambisi walo eChina, singasebenzisa futhi abadlulisi babo.
Imvamisa, ukukhiqizwa kwamasampula kuzothatha izinsuku ezi-5 kuye kwezi-8 futhi ukuhleleka okujwayelekile kwe-batch kuzothatha izinsuku eziyi-15 kuye kwezingu-25. I-oda eliphuthumayo lingahlelwa ngaphambi kokuqinisekiswa.